About Us - Mitsubishi Motors Myanmar - Page 2
Mitsubishi Motors Mandalay – Moved to New Location
Mitsubishi Motors Mandalay – Moved to New Location Mitsubishi Motors Mandalay – 3S New ShowroomMoved to New address : 62nd Street, Between 40 Street and 41 Street, Mahar Aung Myay Township, Mandalay.
Xpander Launch Event
Xpander Launch Event မင်္ဂလာပါရှင့် Mitsubishi New Generation Crossover “MPV Xpander”ကို ပထမဦးဆုံးနေ့မှာ ၅နာရီအတွင်းတခဲနက် အားပေးဝယ်ယူအားပေးခဲ့တဲ့ မိတ်ဆွေအပေါင်းအား အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်
Mitsubishi Attrage ကား ဝယ်ယူအားပေးသွားသော မတင်ဇာမိုးနှင့်မိသားစုအား Mitsubishi Motors မှ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်းနှင့် မတင်ဇာမိုး၏ ယနေ့ကျရောက်သော မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ချစ်ရသူများနှင့် အသက်ရှည်ရှည် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေကြောင်းနှင့် စီးပွားဥစ္စာ ဒီရေအလားတိုးပွားပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းအပ်ပါတယ်ရှင့်…
Free Safety Check Mitsubishi Motors ကနေ Customer များကို အချိန်တိုင်း ဂရုစိုက်မှုပေးနေပါတယ်. မိုးရာသီမောင်းနှင်မယ့်ကားတွေ အန္တရာယ်ကင်းစေဖို့အတွက် မည်သည့်အိမ်စီးကားအမျုုိးအစားကိုမဆို Mitsubishi Motors က Free Safety Check ကိုပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်။ Free Safety Check အစီအစဉ်မှာတော့ Battery, Wiper, Ventilation System တာယာ နဲ့ ဘရိတ်တွေကို အခမဲ့စစ်ဆေးပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပြီး ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိပဲဆိုတော့ အမြန်ဆုံးလာရောက်စစ်ဆေးဖို့တော့ အကြံပေးချင်ပါတယ်ရှင့်… မိုးလည်းကျတော့မယ်.. မိုးတွင်းမှာ မသွားမဖြစ်သွားရမယ့် အလုပ်ကိစ္စတွေကလည်း ရှိနေတယ်. မိုးတွင်း အမြဲလိုလို ရေကြီးရေလျှံတတ်တဲ့ လမ်းတွေ၊ မိုးရေနဲ့ စွတ်စိုချောနေတဲ့ လမ်းတွေမှာ အန္တရာယ်ကင်းစွာနဲ့ သန့်ရှင်းစွာ အနံ့ကင်းကင်းဖြတ်သန်းမောင်းနှင်နိုင်ဖို့အတွက် မိမိကားကို အမြဲစစ်ဆေးသင့်တဲ့ ၁၀ […]
L200 – Double Cab Manual
L200 – Double Cab Manual Extra Cab တစ်စီးစာ တန်ဖိုးနဲ့ Double Cab တစီး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီဖုန်း – 09 260902943, 01 514522
Water Festival Office Closed Date
Water Festival Office Closed Date နှစ်သစ်ကူးမဟာသင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက်မှာ (၁၃-၀၄-၂၀၁၉) မှ (၁၇-၀၄-၂၀၁၉) ရက်နေ့များအထိဖြစ်ကြောင်း အသိပေး အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
နှစ်သစ်မှာ ကားသစ်နဲ့အတူလန်းဖို့ Mitsubishi Showroom ကို သွားကြစို့
နှစ်သစ်မှာ ကားသစ်နဲ့အတူလန်းဖို့ Mitsubishi Showroom ကို သွားကြစို့ မင်္ဂလာပါရှင့် Mitsubishi Motor Myanmar ရြဲ့ မန်မာနှစ်သစ်ကူးအကြိုအဖြစ် ရန်ကုန်မြို့ Mitsubishi Showroom မှာ ကျင်းပမယ့် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲလေးကို လာရောက်ဖို့ Mitsubishi ချစ်သူများကို ဖိတ်ကြားချင်ပါတယ်။ ဒီပွဲလေးမှာ Mitsubishi ကားသစ်ကြီးများကိုလည်း အထူးလျှော့စျေးများနဲ့ ရောင်းချပေးမှာ ဖြစ်ပြီး ပွဲတက်ရောက်သူများကို ဗလာမပါကံစမ်းမဲနှင့် ကားဝယ်သူက်ို အထူးဆုကံစမ်းမဲကြီးများ ပေးအပ်သွားပါမယ် ဆက်ဆက်လာရောက်ကြဖို့လည်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်နော်… နေ့ရက် – 5-4-2019အချိန် – ညနေ ၄ နာရီမှ ည ၇ နာရီအထိနေရာ – အမှတ် ၁၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းနှင့် ရွာမကျောင်းလမ်းထောင့်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း – 09 260902943, […]
Mitsubishi Thingyan Festival
Mitsubishi Thingyan Festival ယခုကျင်းပနေသော Mitsubishi Thingyan ပွဲတော်တွင် Mitsubishi ASX ကားသစ်ကြီးအား ဝယ်ယူအားပေးပြီး Service package ကံထူးသွားသော ကယားပြည်နယ် လွိုင်ကော်မြို့မှ အစ်ကိုကြီး ကိုထင်လင်းအောင်အား Mitsubishi Motors Myanmar မှ အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ပြီး အရာရာအောင်မြင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းအပ်ပါတယ်ရှင့်…. Mitsubishi ကားသစ်ကြီးများကို စျေးများစွာ လျှော့ချပေးထားသည့်အပြင် ဆုမဲများစွာကျန်ရှိပါသေးသဖြင့် ယနေ့ Mitsubishi သင်္ကြန်ပွဲတော်ကြီးကို လာရောက်ဆင်နွှဲကြဖို့လည်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင့်… MITSUBISHI MOTORS MYANMAR SHOWROOMအမှတ် ၁၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းနှင့် ရွာမကျောင်းလမ်းထောင့်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း – 09 260902943, 01 514522
Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX ကားကို ကြိုက်နှစ်သက်စွာ ဝယ်ယူအားပေးသော ကိုဇော်ကြီးအား Mitsubishi Motors Myanmar မှ ကျေးဇူးအထူးပင် တင်ရှိပါကြောင်းနှင့် စီးပွားဥစ္စာများ ဒီရေအလားတိုးပွားပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်။
Water Festival မြန်မာ့ရိုးရာမဟာသင်္ကြန်နှစ်သစ်ကူး အခါသမယမှစ၍ စီးပွားလာဘ်လာဘများတိုးပွားပြီး၊ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာကြပါစေကြောင်း Mitsubishi Motors Myanmar မိသားစုမှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည်။